अचानक बझागं छो’डेर किन रुँ’दै काठमाडौ फर्किइन् सोनिका रोकाय ? (भिडि’यो हेर्नुस्) - Rising Dainik
अचानक बझागं छो’डेर किन रुँ’दै काठमाडौ फर्किइन् सोनिका रोकाय ? (भिडि’यो हेर्नुस्)
December 12, 2020 December 12, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on अचानक बझागं छो’डेर किन रुँ’दै काठमाडौ फर्किइन् सोनिका रोकाय ? (भिडि’यो हेर्नुस्)
काठमाडौ । कोरोना जोखिमका कारण आफ्नो गृहजिल्ला बझागं गएकी सोनिका आखिर काठमाडौ फर्किएकी छन् । कोरोनाका कारण सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि उनी बझागं गएकी थिइन् । उनले लामो समय बझागंमै बिताइन् । झण्डै ७ महिनाको बसाई पछि उनी फेरी काठमाडौ फर्किएकी छन् ।काठमाडौ आइपुगेकी सोनिकाले आफुले संचालन गरेको बुटिकमा पुगेकी छन् । आमासंग आएकी उनले आमालाई मेकअप गरिदिएको भिडियो पनि सार्वजनिक गरेकी छन् ।
लामो समय बझागं बसेकी उनले त्यहीँवाटै भिडियो सार्वजनिक गर्दै आएकी थिइन् । उनले बझागंका गाउँले परिवेशका भिडियो बनाउँदै आएकी थिइन् । त्यस्तै मोडल तथा युट्युवर सोनिका रोकायसंग भिडियो निर्माणमा सहयोगी भएकी रेखा राई अहिले आफ्नै युट्युवमा लागेकी छन् ।सोनिका रोकायको ‘द सोनिका शो’ मा सहभागी भइरहेकी उनी अहिले सोनिकावाट छुट्टीएकी छन् । सोनिकासंग मिलेर एक वर्ष सम्म काम गरेकी रेखा लकडाउन पछि पनि उनी सोनिकासंग बझागं पुगेकी थिइन् ।
अहिले उनीहरुबीचमा समस्या भएको बताइएको छ । उनले सोनिकाको कार्यक्रममा एंगल परिवर्तन भएका कारण आफुसंगै काम गर्न नसकेको बताएकी छन् ।पहिला भिडियोमा राखिने सामग्री र अहिले ‘सोनिका शो’मा राख्ने कार्यक्रम फरक भएका कारण आफु सोनिकावाट अलग्गीएको बताइन् । उनले पहिला सोनिका विना केही सोच्न पनि सकेको थिइन् तर अहिले सोनिकावाट अलग भएर आएपछि आफुले पनि केही गर्नु पर्छ भनेर काठमाडौ फर्किएको बताइन् ।
बझागं छोडेर अचानक किन रुँदै काठमाडौ फर्किइन् सोनिका रोकाय ? (भिडियो हेर्नुस्) तलको भिडियो हेर्नुस्..
विवाहपछि आदित्य नारायणले श्रीमती श्वेतालाई दिए ध’म्की दिदै भने, ‘अन्यथा जाउ आफ्नो माइतिमा’
आदित्य सो अवसरमा श्वेतासँग रमाइलो ध’म्की दिदै भन्छन – कुनै पनि कसर छोड्नु हुँदैन अन्यथा जाउ आफ्नो माइतिमा । जब उनले सबै ठिकठाक गरिन् उनले कुरा सच्याउदै घरमा बस्न भने । आदित्यको कुरा सुनेपछि श्वेताले हाँसो रोक्न सकिनन्।
आदित्य श्वेतासँग विवाह गरेपछि धेरै खुसी छन्। उनका अनुसार श्वेतासँग बिहे गर्नु सपना साकार भएको जस्तो छ। आदित्यले श्वेतालाई विवाह गर्नु अघि ११ बर्षसम्म डेट गरेका थिए । आदित्यले भनेका छन्, ‘श्वेता र मैले विवाह गर्‍यौ, यो सपना जस्तो लाग्छ। यो सपना जस्तो हो जुन सत्य भयो। म मेरो जीवन श्वेता बाहेक अरु कसैसँग बिताउने सोच्न सक्दिन।’
प्रचण्डलाई फेरी अर्को झ’ट्का ओली समुहमा फर्किए बामदेव, गौतमसंगै यी नेताले पनि छोडे प्रचण्डको साथ् !
इन्द्रेणीमा दो’होरी खेलेरै भा’इरल अर्जुन खड्काले ७ बर्ष कान्छी अनुजासंग बिहे, सुनाए बिगतका क’हानी (भिडियो सहित)
बिहेको ३ दिनमै श्रीमान रोहप्रीतसंग किन रिसा इन् नेहा कक्कड ?
November 1, 2020 Ramash Kunwar
September 26, 2020 Ramash Kunwar
October 3, 2020 Ramash Kunwar